UGAAR AH RAGGA: 5 Sababood Oo Gabadha Ay Kuu Diiday | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»UGAAR AH RAGGA: 5 Sababood Oo Gabadha Ay Kuu Diiday
Hani Osman Send an email February 27, 2019
Ma jiro nin jecel inay diido gabar uu aad u rabo balse xaqiiqda ayaa ah in mararka qaar aysan jirin waxaad iskaga ilaalin karto in lagu diido.
Intabadan qaladka waxaa gala ragga.
Hoos ka aqriso 5 sababood oo gabadha ay kuu diiday.
1. Nadaafadaa ka liidataa
Ma jirto gabar rabta nin nadaafad xun ama nadaafaddiisa ay liidato, sidaa darteed haddii aad nadaafad xuntahay waa inaadan ka caroon haddii ay ku diido, nadaafadda waa imaanka barkiis marka ninyohow noqo mid isdaryeela si gabadha ay kuu aqbasho.
2. Kalsooni la’aan
Haddii aadan kalsooni isku qabin walaal, waxaad gabadha ka filataa inay ku diido maxaa yeelay ragga aanan kalsoonida isku qabin waa kuwo ay haweenka ka cararaan. Gabar kasta waxay rabtaa nin isku kalsoon.
Kibirka wuxuu fogeeyaa haweenka marka haddii aad kibirbadantahay, waxaad gabadha ka filataa inay ku diido. Dumarka waa kuwo neceb ragga kibirka badan ee dareema inay dunida ka sareeyaan.
4. Waxaad aaminsantahay in haweenku yihiin dad liita
Ragga qaarkood waxay haweenka u arkaan kuwo liita ama dadka kale ka hooseya, iskuma aragto inay tahay qof kaa liita waana sababtaas tan ay kuu diiday. Waa inaad barataa sida loo qadariyo haweenka haddii aad rabtid inay ku ogolaato.
5. Gacmaha kama deyn kartid
Iyadoo aanan haye ku dhihin ama ku ogolaan ayaa dareemeysaa in gacmahaaga loogu talagalay jirkeeda. Isadji walaal. Ragga qaarkood waa kuwo sidoo kale dila xiriirka cusub waxaana sabab u ah waxay taataabasho ku bilaabaan gabadha. Kuma faraxsananeyso inaad gacmaha la gasho waana inaad ogaataa taas.
4 Arrimood Waa Inaadan Waligaa Ku Sameynin Gabar Wax Walboo Dhaca
Maxaa dhacaya markaad lacag u isticmaasho soo jiidashada haweenka?
Laba Waxyaabood Oo Gabdhaha oo Dhan Laga Rabo Inay Iska Ilaaliyaan Marka La Guursado
16 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney kasta Ay Si Joogta Ah Ugu Dhahdo Ninkeeda
9 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Ugu Sameyso Guriga Si Jaceylku U Kordho